Black Magic: Increase The Size Of Pen-Drive ( From 2GB To 4GB )
Increase The Size Of Pen-Drive ( From 2GB To 4GB )
Posted by Black Magic | Posted in Learning Batch , USB , နည်းလမ်းများ | Posted on 2:31 AM
တချို့တော့သိမှာပါ..၊ အရင်တုန်းက 1GB Memory Card ကို 2GB ထိတိုးတဲ့ Software လေးရှိပါတယ်..၊ ကျွန်တော့ဆီမှာတော့မရှိဘူး..၊ ကျွန်တော်လည်း စမ်းကြည့်ချင်နေတာ.. ၊
ဒီနေ့တော့ MM IT Helper တင်ထားတာတွေ့တော့ ပျော်သွားတယ်..၊
သူကတော့ 2GB to 4GB တိုးပေးတာပါ..။ သူပြောထားတာတော့ 4GB အောက် ပမာဏရှိပြီး Error ကင်းတဲ့ ဘယ် Memory Stick , SD Card ကိုမဆို 4G ထိ တိုးပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားးပါတယ်..၊
100% ရတယ်လို့တော့ ဆိုမထားပါဘူး..၊ ကဲ.. စမ်းလိုက်ရအောင်ဗျာ..၊ အောက်က File လေးကို အရင် ဒေါင်းလိုက်ပါဦး..၊ 121 KB ပဲရှိပါတယ်..၊
ကိုယ် စမ်းမယ့် Stick ထဲမှာ Data တွေမရှိရပါဘူး..။ ပြီးရင် My Computer ထဲဝင်ပြီးတော့ Stick ရဲ့နာမည်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်ပါ..၊
ဥပမာ..၊ ကျွန်တော့ Stick နာမည်က BLACK MAGIC MAKER ဆိုတော့ ရှည်နေလို့ MAGIC ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်..၊
ပြီးရင် ခုနကဒေါင်းထားတဲ့ Software လေးကို Run လိုက်ပါ..၊ အောက်ကအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..၊
အဲ့ထဲမှာ ကိုယ့် Stick ရဲ့ နာမည်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ..၊ ကျွန်တော့ Stick နာမည်က MAGIC ဆိုတော့
MAGIC လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါတယ်..။
(နာမည်ကိုပဲရိုက်ထည့်ရမှာပါ..၊ နောက်က Drive Letter ဖြစ်တဲ့ F တွေ G တွေ H တွေ ထည့်စရာမလိုပါဘူး..၊ ဥပမာ SomeOne(H:) လို့ပေါ်တာကို SomeOne လို့ပဲရိုက်ထည့်ရမှာပါ)
Enter ခေါက်လိုက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..၊
Type the Drive LETTER! ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်..၊ Drive Letter ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောတဲ့အတိုင်း ကိုယ့် Stick နာမည် နောက်က F တွေ G တွေ H တွေကိုပြောတာပါ..၊
ကျွန်တော့ Stick က MAGIC (G:) မို့လို့ G လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်..၊
Type Drive Letter (again!) to start ဆိုပြီးတော့ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်..၊
နောက်တစ်ခေါက်ရိုက်ပေးလိုက်ပါ..၊ Enter ခေါက်ပြီး ခနစောင့်ပေးလိုက်ပါ..၊
Done! Press any key to exit လို့ပေါ်လာရင် ထွက်လို့ရပါပြီ..၊ Stick ကို Computer ကနေ စနစ်တကျ ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ ပြန်တပ်ကြည့်လိုက်ပါ..၊ 3.99 GB ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်..၊ Data ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း 3.99 GB ပြည့်တဲ့ထိ ထည့်လို့ရပါတယ်..၊
PS . Stick တွေကို နာမည်ပေးရင် Space Bar မခြားပါနဲ့ ...၊ ဥပမာ..၊ Mg Mg လို့ပေးမယ့်အစား အလယ်က Space မခြားဘဲ MgMg လို့ပေးပါ..၊
8GB ကို 4GB ပြောင်းမိရင်လည်း မပူပါနဲ့..၊ Format ချလိုက်ရင် 4GB ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..၊
Credit & Thanks To MM IT Helper